बडिगाड खोलाको निर्माणाधीन झेंदी पुल भत्कियो, ५ जना घाइते, घाइतेको हटियामा उपचार हुँदै ! – ebaglung.com
बडिगाड खोलाको निर्माणाधीन झेंदी पुल भत्कियो, ५ जना घाइते, घाइतेको हटियामा उपचार हुँदै !
२०७६ बैशाख १, आईतवार २१:१९	Top News, प्रमुख समाचार
कमल पौडेल, गुल्मी २०७६ बैशाख ०१ । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ र वडा नं. ३ को झेंदी भन्ने स्थानमा निर्माणाधिन बडिगाड खोलाको पक्कि पुल भाँचिदा ५ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको इमरजेन्सी पोलिक्लिनिक हटियामा उपचार भैरहेको छ। घाइतेहरु मध्ये निर्माण व्यावसायी समेत रहेका ऋषिराम इटनी काठमाडौं र बडिगाड गाउँपालिका २ का तुल वहादुर रानालाई पोखरा रिफर गर्ने तयारी भएको अस्पताल श्रोतले जानकारी दिएको छ। सो दुर्घटनामा गुल्मी मुसिकोट नगरपालिकाका रन वहादुर कुमाल, गणेश कुमाल र रुद्र वहादुर कार्कि घाइते भएको अस्पताल श्रोतलाई उदृत गर्दै हटियावाट दिपेश विसीले जानकारी दिनुभएको छ ।
शुक्रवारवाट ढलान सुरु गरि अन्तिम अवस्थामा पुगेको वेला पुल एक्कासी विचवाट भाँचिएको हो । ५५ मिटर लामो सो पक्कि पुल संघिय सरकार सरकार अन्तरगत ५ करोड लागतमा निर्माणाधिन रहेको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ । वडा अध्यक्ष काफ्लेले इन्जिनियरिङ त्रुटिकै कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। जयवुद्ध कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले निर्माण कार्य गरिरहेको थियो ।
गत वर्ष सोहि स्थानमा रहेको झोलुंगे पुल भत्किएपछि सो पक्की पुलको निर्माण भैरहेको थियो । यहि जेठ महिनावाट तर्न मिल्ने गरी तिव्र गतिमा काम भैरहेको पुल भत्किएपछि स्थानियहरु अन्योलमा परेका छन्।
यसैवीच दुधिलाभाटि क्षेत्रमा परेको भिषण पानीका कारण दरमखोलामा बाढी आएको छ । बाढीले नरेठाँटी क्षेत्रमा खोलाको तिरमा भएका केहि छाप्रा, कुखुरा फार्म, हटियाका दरमखोलाको तटिय क्षेत्रमा रहेको छाप्रा वगाएको हटियावाट दिपेश विसिले जानकारी दिनुभएको छ ।
बाढीले दरम खोलामा निर्माणाधिन २ वटा पक्की पुलको निर्माण सामाग्रि वगाएको छ। दरमखोला हाइड्रोको पनि निर्माणाधिन क्षेत्रका सामाग्रि वगाएको सुचना प्राप्त भएको छ । दिउसो बडिगाड खोलामा भत्किएको पुल क्षेत्र झेंदिमा बाढी पुगेर ताल वनेको छ। दिउसो विचवाट भाँचिएको निर्माणाधिन पक्की पुल अहिले पुरै खोलामा खसेको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ ।
विपद् व्यावस्थापन समिति समिति बागलुङका प्रमुख रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेल सहितको टोली घटना स्थल तर्फ आइरहेको छ ।
घोंडावाँधेवाट नेपाली सेनाको टोली घटना स्थल नरेठाँटी तथा हटियामा आइपुगेको छ। दरमखोलाको तटिय क्षेत्रममा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। तटीय क्षेत्रमा सर्तकता अपनाउन प्रहरीले सवैमा अनुरोध गरेको छ।
दरमखोलामा आएको बाढीले जनजीवन प्रभावित, केहि छाप्रा बगायो, नरेठाँटी र हटिया क्षेत्र बढी प्रभावित !